एक्स्पो गण्डकी प्रदेशले गर्व गर्ने प्रोडक्ट हो – Arthik Awaj
एक्स्पो गण्डकी प्रदेशले गर्व गर्ने प्रोडक्ट हो
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर १३ गते बिहीबार ०३:०७ मा प्रकाशित
निजी क्षेत्रको छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा मंसिर १३ गतेबाट सफल एक्स्पो पोखरा हुँदैछ । प्रदर्शनी केन्द्रमा हुने एक्स्पोका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संघका अध्यक्ष तथा एक्स्पो मूल आयोजक समितिका संयोजक दामु अधिकारीसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
सफल एक्स्पो पोखराको तयारी कस्तो छ ?
सफल एक्स्पो पोखराको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । तयारी शतप्रतिशत पूरा भएकाले अब उद्घाटन गर्न मात्र बाँकी छ । त्यो पनि तोकिएकै समयमा गर्नका लागि ठिक्क छ । एक्स्पोको स्टल व्यवस्थापनको कार्य सकिएको छ । उद्योगी÷व्यवसायीहरुले सामानहरु स्टलमा राखिसकेका छन् । मञ्च निर्माण गरेर सजाइएको छ । सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त चुस्त बनाइएको छ । सांस्कृतिक टोली पनि तयारी अवस्थामा छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि टीम बनाएर काम गरिएको छ । एक्स्पोको प्रचारप्रसार पनि राम्रो भएको छ । त्यसैले सबै हिसाबले एक्स्पोको तयारी शतप्रतिशत पूरा भएको छ ।
एक्स्पोमा कति स्टल र कस्ता स्टल रहन्छन् ?
एक्स्पोमा तीन सय स्टल रहन्छन् । विगतमा पनि यही संख्यामा स्टल रहन्थे । हामीले यस वर्षपनि सोही संख्यामा स्टल राखेपनि आवश्यक्ता हेरेर केही थपघट गरेर स्टल राखेका छौं । यस वर्ष हामीले स्टलमा केही फरक गर्ने प्रयास गरेका छौं । औद्योगिक पेभेलियन राखेका छौं । जुन अघिल्ला वर्षहरुमा थिएनन् । यसअघि औद्योगिक व्यापार मेला गथ्र्यौं तर उद्योगका स्टलहरु हुँदैनथे । तर यस वर्ष २० वटा औद्योगिक स्टल रहन्छन् त्यो पनि छुट्टै पेभेलियनमा । यस वर्ष पर्यटनका स्टलहरु रहन्छन् । यो पनि एक्स्पोमा नयाँ हो । मोबाइल पेभेलियन, कृषि, हस्तकलाका सामग्री, वाल उद्यान लगायतका छुट्टाछुट्टै पेभेलियन हुन्छन् भने सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथै रमाइलोका लागि सर्कस र पिङहरु पनि राखेका छौं ।
एक्स्पोमा मोबाइल मेला पनि राख्नुको कारण ?
एक्स्पोको मुख्य आकर्षण मध्ये मोबाइल मेला पनि हो । पहिले पहिले मोबाइल बिलाशिताका सामान मानिन्थ्यो । तर अहिले यो अत्यावश्यक सामानको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । मोबाइल नेपाली जनताको लागि अत्यावश्यक चिज मध्येको एक हो । र मोबाइलको पनि समय अनुसार नयाँनयाँ मोडलहरु आइरहेका छन् । यसमा पनि धेरै फेसिलिटी र फिचर्सहरु आएका छन् । त्यसैले यी सबै मोबाइलका मोडलहरु, तिनका फिचर्स र फेसिलिटीहरु बारे जानकारी आवश्यक भएकाले तिनै जानकारी दिने उद्देश्यले मोबाइल वितरक संघसँग मिलेर एक्स्पोमा मोबाइल मेला जोडिएको हो । मोबाइल पेभेलियनमा २० भन्दा बढी ब्राण्डका ३० वटा स्टल रहन्छन् ।
पहिलेको राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलालाई एक्स्पो पोखरा बनाउनुभएको छ । किन ?
बिगतमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासलाई हेर्दाखेरी पहिले पोखरा औद्योगिक मेला नै भनेर गर्ने गथ्र्यौं । बिचमा यसलाई राष्ट्रिय स्तरको बनाऔं भनेर राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला बनायौं । त्यसबेला त्यतिधेरै मेला महोत्सवको टे«न्ड थिएन । र अहिले पछि बिस्तारै मेला÷महोत्सव सामान्य क्लबहरुले पनि आयोजना गर्न थाले । त्यो हिसाबले हेर्दा पहिले राष्ट्रियस्तरको भन्यौं तर राष्ट्रिय स्तरको प्रोडक्टहरु अथवा राष्ट्रिय स्तरबाटै सबै ठाउँबाट समावेश नहुँदा अप्ठ्यारो हो कि भन्ने महशुष ग¥यौं । त्यतिमात्र होइन पोखरा भनेको पर्यटनको राजधानी पनि हो । यो गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि हो । पोखरा आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित र स्थापित नाम भएकाले कतै महोत्सवमा हामीले पोखरालाई छुटायौं कि ? भन्ने हिसाबले महशुष पनि भयो । र महोत्सवमा अलिकति चेञ्जपनि आउनुपर्छ अब भन्ने हिसाबले हामीले अहिले एक्स्पो पोखरा नामाङ्करण गरेका हौं । यसमा सफल ग्रुप जसले अघिल्लो वर्ष पनि टाइटल प्रायोजक गरेकाले त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिदै सफल एक्स्पो पोखरा बनाएका हौं । एक्स्पो पोखरा भन्दा पोखरालाई पनि जोड्ने, अनि पोखरेलीले अपनत्व महशुष गर्नुका साथै यो इभेन्ट हाम्रो पनि हो है भन्ने र मेलाले परिस्कृत रुप लियोस् भनेर नाम परिवर्तन गरिएको हो ।
अघिल्ला मेला÷महोत्सवहरु भन्दा यो एक्स्पो फरक छ कि उस्तै हो ?
मेला मात्रै भन्दा त्यो रमाइलो मेला मात्रै हो कि भन्ने बुझिन्थ्यो । तर एक्स्पो भनेर गइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय टे«न्डमा पनि यहाँ गरिरहेको मेलालाई ट्रेड फेयरको रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसलाई व्यवसाय प्रवद्र्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यो सँगसँगै एक्स्पोमा पुग्ने दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिलाउने वा मनोरञ्जनको बहानामा दर्शकहरु पसुन् र त्यसरी पसेका दर्शकले सबै स्टल र सामानको अवलोकन गरुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसबाट स्टल राख्नेहरुको व्यवसाय प्रबद्र्धन होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसैले मेला महोत्सव भन्दा रमाइलो मात्रै हो कि भन्ने नहोस् भनेर एक्स्पो बनाइएको हो । यद्वपि, यस एक्स्पोमा सांस्कृतिक कार्यक्रम यस वर्षपनि हुन्छ । तर त्यो केवल एक्स्पोमा दर्शक पु¥याउन र त्यहाँ पुगेका दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्यकबाट मात्र प्रेरित हो ।
एक्स्पोको मूख्य आकर्षणहरु के–के हुन् ?
एक्स्पोको मूख्य आकर्षण भनेको मोबाइल मेला पनि हो । मोबाइल अत्यावश्यक भइसकेको छ । र ती मोबाइलको नयाँ नयाँ मोडल, तिनका फिचर्स र फेसिलिटीको जानकारी लिने अवसर पनि हो । त्यस्तै गाडीहरु पनि पहिले लक्जरियसका साधनहरु मानिन्थे तर अहिले अत्यावश्यक साधनको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले ती गाडीका मोडलहरु र ती बारे जानकारी दिन अटो मोबाइलसका छुट्टै पेभेलियन हुन्छ । हस्तकलाका स्टलहरु पनि हुन्छन् । यस पटक हामीले पर्यटनलाई पनि जोडेर होमस्टे तथा होटलहरुको पनि प्रवद्र्धन गर्न स्टल राखेका छौं । होमस्टेको डेमो पनि गराउने प्रयास गरेका छौं । त्यस्तै पोखरा पर्यटन परिषदसँगको सहकार्यमा पोखरा आसपासमा हुने ¥याफ्टिङ, बञ्जी जम्प, क्यानोनिङ, जीप फ्लायर, प्याराग्लाइडिङ, हट बेलुन लगायतका स्टलहरु राखेका छौं । कृषि, पाकिस्तानी कपडाहरु, फर्निचर लगायतलाई पनि जोडेका छौं । त्यसैले हामीले कुनै निश्चित भन्दा पनि सबै किसिमका आइटमहरुलाई प्राथमिकता दिएर स्टल उपलब्ध गराएका छौं । यी जानकारीका साथै एक्स्पोमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुलाई पनि जोडेका छौं । बच्चाहरुलाई रमाउनका लागि बाल उद्यान पनि राखेका छौं ।
एक्स्पोमा बिगत भन्दा नयाँ के छ ?
एक्स्पोमा नयाँ भनेको पर्यटन स्टल हो । जहाँबाट पोखरा क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका प्रोडक्टहरुको जानकारी दिनलाई स्टल राखिएको हो । त्यहाँबाट ¥याफ्टिङ, बञ्जी जम्प, क्यानोनिङ, जीप फ्लायर, प्याराग्लाइडिङ, हट बेलुनको जानकारी दिइनुका साथै टिकट पनि उपलब्ध गराइन्छ । हामीले पर्यटनलाई पनि जोडेर होमस्टे तथा होटलहरुको पनि प्रवद्र्धन गर्न स्टल राखेका छौं । होमस्टेको डेमो पनि गराउने प्रयास गरेका छौं । मोबाइल मेला पनि रहेकाले अघिल्ला वर्षका भन्दा पनि व्यवस्थित गरिएकाले नयाँनयाँ मोडलहरु, तिनको फिचर्स र फेसिलिटीहरु जानकारी गराउन मोबाइल पेभेलियन राखेका छौं । अर्को हामीले यस एक्स्पोमा मिलिनियम ट्रेकको पनि स्टल राखेका छौं । हामीले एक्स्पोमा नेपाली संस्कृतिमा लोप हुँदै गएको ढिंकी, जाँतो, सिलौटा, परालको टौवालगायत राखेका छौं । जुन शहरका बालबालिकाले बिर्सन लागेकाले त्यो अवलोकन गरेर बुझुन् भनेर राखेका छौं । हामीले पाकिस्तानी छालाका आइटमहरु पनि राख्न स्टल उपलब्ध गराएका छौं । यो सबै हिसाबले पहिले भन्दा यस पटक धेरै भिन्नता छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
एक्स्पोमा दर्शक किन आउने ?
स्वभाविक हिसाबले एक्स्पोमा राखिएका ३ सय स्टलमा विविधता रहेकाले ती अवलोकन गर्न आउनुपर्छ । ती स्टलमा राखिएका सामानको अवलोकन, तिनका विशेषता, उत्पादन गर्ने तरिका लगायतबारे जानकारी लिनपनि सर्वसाधारण सबै एक्स्पो आउनुपर्छ । अर्को कुरा भनेको एउटै थलोमा सबै सामान खरीद गर्नपनि पाउने भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न आउनुपर्छ । बालबालिकालाई खुशी दिन वाल उद्यान भएकाले बच्चाहरुलाई खुशी दिनपनि आउनुपर्छ । सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्नका लागि पनि आउनुपर्छ । गाडी र मोबाइलको रोजी रोजी खरीद गर्नका लागि पनि एक्स्पो आउँदा फाइदा हुन्छ । अझ एक्स्पोलाई आगामी दिनमा यसलाई कसरी लैजाने भन्नेबारेमा हामीलाई सुझाव दिनका लागि पनि आउनुपर्छ । त्यसैले म सबैलाई आफूले एक्स्पो हेर्न, सामान खरीद गर्न, बच्चालाई खुशी दिनुका साथै हामीलाई सुझाव दिनपनि उहाँहरु आउनुपर्छ ।
मेला महोत्सवको आकर्षण घट्दो छ । दर्शक आकर्षण गर्न केके गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो मेला महोत्सवको आकर्षण घट्दो छ । यसको मूख्य कारण भनेको विभिन्न संघसंस्थाले बेला बेला गरिरहने मेला महोत्सवकै कारणले हो । तर मेला महोत्सवको आकर्षण संख्यात्मक रुपमा घटेको भएपनि गुणात्मक रुपमा भने घटेको जस्तो मलाई लाग्दैन । मेलामा रमाइलो गर्न जाने, एकपटक त्यहाँ पुगेको थिएँ भनेर देखाउनलाई आउने मान्छेको संख्या घटेको होला तर जानकारी (इन्फरमेसन) लिन चाहनेको आकर्षण घटेको छैन । अर्थात गुणात्मक आकर्षण घटेको छैन भन्ने मेरो दाबी हो । तैपनि हामीले एक्स्पोमा दर्शक भित्र्याउन प्रचारप्रसारलाई तिव्र बनाएका छौं । सांस्कृतिक कार्यक्रममा चलेका र दर्शकले रुचाएका कलाकारलाई ल्याउँदैछौं । त्यस्तै स्टलहरुमा पनि नयाँ र विविधता दिने प्रयास गरेका छौं । जसले मेलामा आउनलाई सर्वसाधारणलाई आकर्षण गरोस् ।
एक्स्पोमा कति दर्शक र कारोबारको अपेक्षा छ ?
एक्स्पोमा विगतको भन्दा दर्शक पनि बढ्छन् र कारोबार पनि बढ्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । एक्स्पोको करीब ३ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।